Avy any amin’ny kolikoly mankany amin’ny kolontsaina – andran-tsiro iray avy amin’ny tendro atsimon’i Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2018 7:09 GMT
Raha toa ka manakaiky ny vanim-potoan'ny fialantsasatra, any Afrika Atsimo lasa fantatra amin'ny anarana hoe vanim-potoanan'ny hala-bola ihany koa ity fotoana iray ao anatin'ny taona ity. Satria be ny vola mifamoivoy mba hamaliana ny filan'ireo mpiantsena mandritra ny Noely ary koa ny an'ireo mpiala sasatra, vondrona mitam-piadiana ahitana mpikambana eo amin'ny 15 na 20 eo, mitana basy R4 sy AK47 fitondra miady manafika fiara fitondràna vola, izany rehetra izany ao anatinà tetikady miaramila tsara petraka. Apetraky ny blaogy It is the Question ny adihevitra hahafantarana raha toa ka tokony hiezaka ny hankahery ny fiarahamonina tsy mampiasa lelavola loatra i Afrika Atsimo.
Tsy lavitry ny lohateny lehiben'ireo haino aman-jery afrikanina tatsimo mihitsy ny lahatra miandry ny filoha lefitra afrikanina tatsimo, Jacob Zuma, izay tokony hiatrika fitsarana amin'ny volana Jolay 2006 noho ny kolikoly ary mbola lohahevitra malaza foana ao amin'ny tontolon'ny blaogy any an-toerana. Tian'i Hope Flower ho fantatra raha toa ka manondro ady miafina lehilbe kokoa mihombo ao Afrika Atsimo ny ady fahefana eo amin'i Zuma sy ny Filoha Thabo Mbeki ao amin'ny Kaongresy Nasionaly Afrikanina (ANC). Resahany ny momba ny hevitra hoe raha tokony ady eo amin'ny fotsy sy ny mainty, tafiditra ao anatin'ny adin-tsaranga eo amin'ny manankarena sy ny mahantra izao ny firenena. Momba izany ihany, miresaka mikasika ireo maro mpomba an'i Jacob Zuma ihany koa i fodder izay an'arivony no tokony hiseho eo anoloan'ny Fitsarana Avon'i Durban amin'ny Asabotsy, rehefa tsy maintsy hanao fisehoana fohy i Zuma. Ho ampangaina amin'ny fomba ofisialy i Zuma ary ho faritana amin'izany ny fotoana hiatrehany ny fitsarana.
Farany, miverina velona indray ny hip hop / tononkalo ventesina ao Afrika Atsimo, indrindra ao Johannesburg renivohitra, fantatr'ireo mponina amin'ny anarana hoe Jozi (teny avy amin'ny fiteny manokan'ireo ambanitanàna mainty). Iray amin'ireo poeta malaza indrindra ao amin'ny firenena i Lebo Mashile ary fantatra amin'ny tononkalony feminista tena tsara ary mivaivay.